September 11, 2021 - Khitalin Media
ဒီ​ေန႔အခ်ိန္ထိ​ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ဒူ.းမေထာ.က္ေနာ.က္မဆု.တ္ဘဲျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾက​ေသာ ဂီတညီအစ္ကို သုံး​ေယာက္​ဆုိတာ
September 11, 2021 by Khitalin Media
မန္မာနိုင္ငံမွာအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းျပည္သူေတြနဲ႕အတူအႏုပညာရွင္ေတြကလက္မခံဘဲဆန့္က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္တခ်ိဳ႕လည္းဖ.မ္းဆီ.းခံခဲ့ရသလိုတခ်ိဳ႕ကလည္းလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကိုထြက္ေျပ. တိ.မ္းေရွာ.င္ခဲ့ၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုမတရားဖ.မ္းဆီ.းမႈေတြရွိတာေၾကာင့္တခ်ိဳ႕အႏုပညာရွင္ေတြက ေၾကာက္လ.န့္ၿပီးေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာမပါဝင္ဖို႔ခံဝန္ကတိထိုးကာေ.သြးေ.အးသြားၾကတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေသြးမေ.အးဒူ.းမေထာ.က္ဘဲရဲရဲဝင့္ဝင့္ေတာ္လွန္ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြထဲမွာဂီတညီအစ္ကိုေတြျဖစ္တဲ့အာဇာနည္၊က်.ားေပါ.က္၊ရန္ရန္ခ်မ္းတို႔ကလည္းထိပ္ဆုံးကပါဝင္ေပးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာသုံးေယာက္လုံးကလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာေရာက္ေနၿပီးစစ္အာဏာရွင္ကိုဆက္လတ္ေတာ္လွန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း သူတိူ႔သုံးေယာက္ရဲ႕သတၱိနဲ႔ရဲရင့္မႈကိုဂုဏ္ယူမဆုံးျဖစ္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အႏုပညာရွင္ေတြလိုင္းေပၚမွာအလွပုံေတြတင္ေစ်းေတြေရာင္းရင္းသာယာေနေပမယ့္ျပည္သူနဲ႔ရပ္တည္တဲ့အႏုပညာရွင္ေတြကေတာ့ေတာထဲမွာ ခ.က္ခ.က္ခဲခဲရင္ဆိုင္ရင္းစစ္အာဏာရွင္ကိုေတာ္လွန္ေနတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအေပါင္း က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ေဘးဘယာေဝကြာၿပီး လိုရာပန္းတိုင္ကို အျမန္ေရာက္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ခရက္​ဒစ္​ SAI ယူနီကုဒ္ျဖင္႔ ဖတ္ရန္ မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သူတွေနဲ့အတူအနုပညာရှင်တွေကလက်မခံဘဲဆန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တချို့လည်းဖ.မ်းဆီ.းခံခဲ့ရသလိုတချို့ကလည်းလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုထွက်ပြေ.း တိ.မ်းရှော.င်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမတရားဖ.မ်းဆီ.းမှုတွေရှိတာကြောင့်တချို့အနုပညာရှင်တွေက ကြောက်လ.န့်ပြီးတော်လှန်ရေးကြီးမှာမပါဝင်ဖို့ခံဝန်ကတိထိုးကာေ.သွးေ.အးသွားကြတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသွေးမေ.အးဒူ.းမထော.က်ဘဲရဲရဲဝင့်ဝင့်တော်လှန်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဂီတညီအစ်ကိုတွေဖြစ်တဲ့အာဇာနည်၊ကျ.ားပေါ.က်၊ရန်ရန်ချမ်းတို့ကလည်းထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာသုံးယောက်လုံးကလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရောက်နေပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်လတ်တော်လှန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူတိူ့သုံးယောက်ရဲ့သတ္တိနဲ့ရဲရင့်မှုကိုဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အနုပညာရှင်တွေလိုင်းပေါ်မှာအလှပုံတွေတင်ဈေးတွေရောင်းရင်းသာယာနေပေမယ့်ပြည်သူနဲ့ရပ်တည်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကတော့တောထဲမှာ ခ.က်ခ.က်ခဲခဲရင်ဆိုင်ရင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ဘေးဘယာဝေကွာပြီး လိုရာပန်းတိုင်ကို အမြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ် SAI
သင့်ဘဝလက်တွဲဖော်ကို ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ရွေးချယ်သင့်တယ် ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာအပျော်ထားအပ်တဲ့ အရာမဟုတ်လို့ဖျော်ရည်အတူ သောက်နိုင်ရုံနဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာယမကာ တစ်ပုလင်းမဟုတ်လို့ခဏတာ ယစ်မူးချင်ရုံအတွက်နဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး။ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာခဏတာအတွက်မဟုတ်လို့တွေ့ကရာလူရှာမယ် စိတ်ကူးနဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာအာပလာလူတစ်ယောက်မဖြစ်သင့်သလိုအချစ်သာ အဓိကဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး။ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာပညာတတ် ဂုဏ်ကြီးကျယ်တဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်ရှိရုံနဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာဥစ္စာကြွယ်ဝ တိုက်တာကားများပိုင်ဆိုင်ရုံနဲ့လည်း မရွေးချယ်သင့်ဘူး။ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာကိုယ်တစ်ယောက်အတွက်သာသေဖော်ရှင်ဖက်ဖြစ်သူမရှိအတူ ရှိအတူနားလည်မှုပေးနိုင်သူသာရွေးချယ်ပါ။ ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာမိမိရဲ့ချို့ယွင်းချက်မှန်သမျှကိုသိသိကြီးနဲ့ လုံးဝနောက်ဆုတ်တွေဝေသွားခြင်း ဆိုတာမရှိဘူး …နောကဆုံးထွက်သက်ထိ မိမိရဲ့လက်ကိုရဲဝင့်စွာကိုင်ဆွဲပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသမျှပြသနာပေါင်းစုံကို အတူတူဖြေရှင်းပေးမဲ့သူလေ ဂရုစိုက်မှု့၊ ယုံကြည်ပေးမှု့တွေနဲ့ပေးဆပ်ပြီး ထာဝရချစ်နေမဲ့သူဟာမိမိရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော် စစ်စစ်ပါပဲ။ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာကြုံသလိုရွေးချယ်လို့ရဘူးလေကိုယ့်ဘဝနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လိုတယ် ဘဝဘက်တွဲဖော်ဆိုတာအရမ်းချမ်းသာဖို့မလိုဘူး ကိုယ်နဲ့အတူ ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လိုသလိုဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ် ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာ ပန်းချီကား တစ်ချပ်လိုပါပဲ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ဖို့ထက်ခံစားနားလည်ပေးတတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်…။ Crd Zawgyi သင့္ဘဝလက္တြဲေဖာ္ကို ဒီလိုအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တယ္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ဆိုတာအေပ်ာ္ထားအပ္တဲ့ အရာမဟုတ္လို႔ေဖ်ာ္ရည္အတူ ေသာက္ႏိုင္႐ုံနဲ႔လည္းမေ႐ြးခ်ယ္သင့္ဘူး ဘဝလက္တြဲေဖာ္ဆိုတာယမကာ တစ္ပုလင္းမဟုတ္လို႔ခဏတာ ယစ္မူးခ်င္႐ုံအတြက္နဲ႔လည္းမေ႐ြးခ်ယ္သင့္ဘူး။ဘဝလက္တြဲေဖာ္ဆိုတာခဏတာအတြက္မဟုတ္လို႔ေတြ႕ကရာလူရွာမယ္ စိတ္ကူးနဲ႔လည္းမေ႐ြးခ်ယ္သင့္ဘူး ဘဝလက္တြဲေဖာ္ဆိုတာအာပလာလူတစ္ေယာက္မျဖစ္သင့္သလိုအခ်စ္သာ အဓိကဆိုတဲ့ … Read more
ချစ်ဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ စိတ် (၆) ခု ၁ – ချော့မယ့်သူသာ ရှိရင် ပိုပြီး ငိုချင်တတ်တာ လေးရယ် ၂ – တစ်ချက် တစ်ချက် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ပြန်ပြန် နှိပ်စက် နေတဲ့ သဝန်တိုမှုလေးရယ် ၃ – စကားချင်း စစ်ခင်းလို့ နိုင်ရင်နိုင် မနိုင်ရင် ရှက်ရမ်း ရမ်းပြီး ကိုက်တတ်တာလေးရယ် ၄ – တစ်ခါတစ်လေ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ရင့်ကျက်တဲ့ စကားတွေနဲ့ ဆိုဆုံးမလေ့ ရှိတတ်တာလေးရယ် ၅ – ပျော်နေတဲ့အချိန် ” သာလိကာ ” လေးလို စကားများပေမယ့် စိတ်မကြည်ရင် စူပုတ်ပုတ် မျက်နှာနဲ့ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းတဲ့ ရိုးသားမှုလေးရယ် ၆ – စိတ်တိုနေတဲ့အခါ … Read more
ခံစားချက်ပြပုံတွေက ပြောပြပေးမယ့် လက်တလောသင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာများ ခံစားချက်ပြပုံတွေက ပြောပြပေးမယ့် လက်တလောသင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာများသင့်အနေနဲ့ လက်တလော ဘယ်လိုအရာတွေကို ကြုံတွေ့ရမလဲ ဆိုတာ သိချင် ပါသလား? ဒီနေ့မှာတော့ စိတ်ခံစားချက်ကိုပြသပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေး ထားမှာဖြစ်ပြီး သင် အနှစ်သက်ဆုံးပုံ တစ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြီး လက်တလော သင်ကြုံတွေ့ရမယ့် အရာတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက် ရအောင်နော်။ (၁) HOPE ( မျှော်လင့်ချက်)သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အရာတွေ အတွက် အောင်မြင်မှု ရရှိဖို့ အချိန်နည်းနည်းပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရှိနေရှိနေ လက်မလျော့ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာ သေချာပေါက် အောင်မြင်လာမယ့် အရာတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ရည်မှန်း … Read more
ရုပ်ရည် နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ စန်းပွင့်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
အချိုု့သော ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရုပ်ရည် ရူပကာယ သာမာန်သာရှိပေမယ့် လူမှုရေး နဲ့ အချစ်ရေး နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင် ကြပါတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီလူတွေမှာ ဘာအရည်အချည်းတွေ ရှိသလဲလို့ လေ့လာလိုက်တဲ့ အခါမှာ အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကို သွားတွေ့ပါတယ်။ (၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိပါ လူမှုရေးနဲ့ အချစ်ရေးမှာ စန်းပွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးရှိထားရမယ့် အရည်အချင်း က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပါဘဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိမှသာ အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိဘူး ဆိုရင်တော့ အရာရာမှာ နိမ့်ကျနေရဦးမှာပါ။ အောင်မြင်မှုတွေလည်း နှေးကွေးနေဦးမှာပါ။ (၂) ပွင့်လင်းရိုးသားမှုရှိပါ ဒုတိယ အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ ပွင့်လင်းတဲ့သူတွေဟာ လူမှုရေး နဲ့ အချစ်ရေး မှာ … Read more
ချစ်သူသေဆုံးသွားပြီး ကောင်လေးနောက်တစ်ယောက်ပင် ရနေပြီဖြစ်သော်လည်း ရည်စားဟောင်းသေဆုံးသည့် နေရာလေးမှာ နှစ်စဉ်လာငိုလေ့ရှိသည့် သနားစရာ ကောင်မလေး
ချစ်သူသေဆုံးသွားပြီး ကောင်လေးနောက်တစ်ယောက်ပင် ရနေပြီဖြစ်သော်လည်း ရည်စားဟောင်းသေဆုံးသည့် နေရာလေးမှာ နှစ်စဉ်လာငိုလေ့ရှိသည့် သနားစရာ ကောင်မလေး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဂျန်နီယာဆိုသည့် ကောင်မလေးဟာ ချစ်သူအသစ်ပင် ရရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း ရည်စားဟောင်းကို မမေ့နိုင်ဘဲရှိနေပါသေးတယ်။သူမဟာ နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းပင် အတိတ်က လွမ်းဆွတ်နာကြင်စရာ နေရာလေးမှာ အမြဲတမ်းလာငိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စဥ်မှာ လွန်ခဲ့သော ၄နှစ်ခန့်က ကောင်မလေးဟာ သူ၏ချစ်ရတဲ့ချစ်သူမော်ဒယ်လေးနဲ့အတူ ကမ်းခြေမှာ အပျော်ခရီးထွက်ရင်းဖြင့် လှေစီးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်တွင် လှိုင်းလုံးကြီးများဟာ ရုတ်တရပ်ပေါ်လာသောကြောင့် မတော်တဆဖြစ်ခဲ့ပြီး ချစ်သူကောင်လေးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာသောအခါ အချစ်သစ်နှင့်အတူ ဘဝကိုပျော်ရွင်အောင် ဖြတ်သန်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း ချစ်သူဟောင်းကို မမေ့နိုင်ဘဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်း ကောင်မလေးဟာ မတော်တဆဖြစ်ခဲ့သည့်နေရာသို့ နှစ်စဥ်ရက်ရောက်တိုင်း လာရောက်ကာ ငိုကြွေးလေ့ရှိတယ်ဟု သိရပါတယ်။ Search for:
ဘယ္ေတာ့မွ မခၽြဲတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြရဲ့ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ အက်င့္စရိုက္ေလးမ်ား
ဘယ္ေတာ့မွ မခၽြဲတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြရဲ့ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ အက်င့္စရိုက္ေလးမ်ား မိန္းကေလးတိုင္းက ခၽြဲတတ္ေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္ေလးေတြ အရည္ေပ်ာ္သြားေလာက္ေအာင္ကို ခၽြဲတတ္ၾကတဲ့သူေတြ ရွိေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ နည္းနည္းေလးေတာင္ မခၽြဲတတ္ၾကပါဘူး။ သူတို႔လို မခၽြဲတတ္တဲ့ မိန္းကေလးမွာေတာ့ သူမ်ားထက္ အနည္းငယ္ ထူးျခားတဲ့ အက်င့္စရိုက္ေလးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ မခၽြဲတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြမွာ ဒီလိုမ်ိဳးအရာေတြကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဘယ္ေတာ့မြ မခၽျဲတတၱဲ့ ေကာေငၼလးေၾတရဲ႕ သူမ္ားနဲ႔မတူတဲ့ အက္င့္စရိုက္ေလးမ္ား လြယ္လြယ္ အထင္မႀကီးဘူး။ သူတို႔ေတြက လူတစ္ေယာက္ကို လြယ္လြယ္နဲ႔ အထင္ႀကီးတဲ့အက်င့္မ်ိဳး မရွိၾကပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ကို ျမင္႐ုံနဲ႔ အထင္ႀကီးလို႔ မရသလို ရင္းႏွီးသြားတိုင္းလည္း အထင္ႀကီးလို႔ မျဖစ္ေသးဘူးဆိုတာမ်ိဳးကို သူတို႔က ေကာင္းေကာင္း နားလည္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က တျခားတေယာက္ကို အထင္ႀကီးၿပီး ဖားတာမ်ိဳးကိုလည္း မလုပ္တတ္ၾကပါဘူး။ … Read more